Abakhiqizi bezimfuyo bathatha ukuphathwa kwezilwane ezinomsoco okunamandla kangangokuthi iNational Wool Growers 'Association, i-Red Meat Producers' Organization, i-Mohair Growers 'Association kanye neWallife Ranching South Africa yasungula i-Predation Management Forum ngoJuni 2009.
Kunezizathu ezihlukahlukene zokuthi kungani leli qembu lenziwa, phakathi kwabanye ukuqaphela ukuthi isikhathi sokudlulela asikho emgodini nokuthi amasu nezenzo ezibhekiswe kule nkinga zidinga ukuhlolwa ngokulawulwa komthetho eNingizimu Afrika, ngenkathi kuhlonishwa ilungelo labantu ngabanye lokuzivikela zokuphila kanye nempahla, njengemfuyo kanye nomdlalo. Kukhona nesidingo esikhulayo sokuqinisekisa ukuthi amasu okubhekana nokuphatha inkinga asekelwe ezimisweni zesayensi ezizwakalayo.
Umgomo wesigungu, ngokusho kwewebhusayithi ye-Predation Management Forum, ukuhlinzeka isiteji sokuxhumana nokuhlanganiswa kwemisebenzi yezinsiza zempahla emikhakheni yezemfuyo kanye nemidlalo yokunciphisa ukulahleka kokudlulela kwangaphambili ngokusebenzisa "izindlela ezamukelekayo ngokwemvelo nangokwemvelo, evikela ukuhlukahluka kweNingizimu Afrika".
Ukuze baphumelele ekulawuleni izilwane, bonke abalimi nabanikazi bomhlaba kudingeka basebenze ndawonye, ​​ngoba izinkinga epulazini elilodwa zizokhuphuka futhi zithinte ezinye amapulazi. Ukuba nepulazi eduze nendawo yokulondoloza noma umlimi wezimpelasonto, ongakhathazeki kakhulu ngalezi zilwane, kungukuthi, ukukhathazeka kwangempela.
Izindleko zokuphathwa okuqhubekayo kuyinselele enkulu, ikakhulukazi kubalimi abancane nabakhulayo, ngoba ukucingo kuyabiza kakhulu futhi abalimi abaningi abanalo izimoto noma amathuluzi okuphatha lezi zilwane ngempumelelo. Kwezinye izifundazwe, imvume ingadingeka ukudubula noma ukubamba umonakalo othile obangela izilwane futhi uma kudutshulwa izinhlobo ezithile zezilwane, abalimi kudingeka bakhokhe imali engaphezu kuka-R500 ngesilwane ngasinye (ngo-2016).
Isimo esifanayo sisebenza kubalimi bomphakathi, lapho umbuzo uvame ukuphakanyiswa ngokuthi ngubani okufanele athathe "ithebhu" yalezi zindlela zokungenelela.